सडकभरि छाडा चौपाया ? [फोटोफिचर]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
सडकभरि छाडा चौपाया ? [फोटोफिचर]
पुस २४, २०७५ शाहीमान राई
जनकपुर — प्रसिद्ध धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय सहर जनकपुरका सडकमा घरपालुवा चौपाया छाडा छाड्नाले सवारी आवगमनमा अवरोध हुने गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने ढल्केबर–जनकपुर राजमार्ग, परिक्रमा सडक, एयरपोर्ट मुरलीचोक, रामचोक, जनकचोक, शिवचोक, भानुचोक, मिल्सएरिया रेलवेस्टेसनलगायत व्यस्त सडकमा जताततै गाईगोरु, भैंसी, बाख्रा, खसी, घोडालगायत घरपालुवा जनावर देखिन्छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका, प्रहरी, प्रशासनले छाडा चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७५ १८:२८
छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी भएकोले जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कार्यालय हाताभित्र कान्जीहाउस (पक्राउ गरिएका गाईवस्तु राख्ने ठाउँ) बनाएको छ । तर, जनकपुरमा यति धेरै छाडा चौपाया छन् कि नियन्त्रण गरेर ल्याउँदा कान्जीहाउसमै अट्दैनन् । छाडा चौपाया बीच सडकमा सुत्ने, हिँड्ने, उभिने र यताउता हिंडदा सवारी दुर्घटना पनि हुने गर्छ । सवारीले ठक्कर दिंदा मृत्यु भए चालकले मूल्यभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्छ । सडकमा छाडिएका घरपालुवा जनावर नियन्त्रणमा लिएर कान्जीहाउस पुर्‍याएमा चौपायाको धनीलाई उपमहानगरपालिकाले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले छाडा चौपाया नियन्त्रण प्रयास गरेपनि असफल भएको उपमहानगर उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रले बताइन् । नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गाईगोरु, भैंसी, बाख्रा, घोडा लिन पशुपालक चौपाया धनीहरु लिनै आउँदैनन् । आफ्नो चौपाया लिन नआएपछि नगरपालिकाले उल्टै पालिदिनुपर्ने, घाँस र जनशक्ति उल्टै खर्च हुने गरेको छ । जरिवाना तिर्न गाह्रोले उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेका चौपाया लिन नआएका हुन् । उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएका चौपाया धनीहरु लिन नआए लिलाम बिक्री गर्ने व्यावस्था भए मात्र सडकमा छाडा चौपायाको संख्या घट्न सक्ने उपप्रमुख मिश्रले बताइन् ।
सडकमा घरपालुवा साँढे र मन्दिरमा चढाएर छाडिएका साँढेलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर निकै टाढाटाढाको गाउँतिर पठाइएको छ । तर, पशुधनीले आफ्नो चौपायालाई घाँस दिएर बाँध्नुको सट्टा छाडा छोड्ने गरेका छन् । छाडा पशु नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको जनकपुर ५ कि वडासचिव जमुना भूजेलले बताइन् । उनले पशुधनिको बेवास्ताका कारण उपमहानगपालिकाको कान्जीहाउससमेत प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
स्काउट प्रमुखमा भण्डारी
काठमाडौँ — सरकारले उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
स्काउट ६ महिनादेखि नेतृत्व विहीन थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।
भण्डारी यस अघि स्काउटको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तदर्थ समितिमा कास्कीका शिवबहादुर भण्डारी, भक्तपुरका बिजेन्द्र ध्वजु, सर्लाहीका इन्द्रभुषण अधिकारी र धनुषाकी सीमा कर्ण छन् ।
समितिका पदाधिकारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । तदर्थ समितिलाई ६ महिनाभित्र ऐन संशोधन गरी निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्काउटको ऐन संशोधन नभएका कारण लामो समयदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७५ १७:२३